Doorashooyinkii barlamaaniga dalka Masar oo dib loo dhigay – SBC
Doorashooyinkii barlamaaniga dalka Masar oo dib loo dhigay
Cairo:-Golaha ciidanka ee gacanta ku haya talada dalka Masar ayaa shaaca ka qaaday dib u dhigidda doorashooyinka barlamaaniga dalkaas, taasi oo la filayey in ay dhacdo bisha September ee soo socoto.
Goluhu waxa uu go’aamiyey in doorashooyinkaas u qabsoomaan saddex marxaladood islmarkaana golaha shacabka iyo wadatashiga hal waqti lawada qabto.
Ninka lagu magacaabo Mamduux Shaahiin oo ah kaaliyaha wasiirka gaashaandhiga arrimaha qaanuunka xubinna ka ah golaha sare ayaa sheegay in doorka ciidanka kaga aadan inta doorashooyinku socdaan ay noqon doonto keliya ilaalinta amniga iyadoo garsooka keliya uu maamuli doono howlaha doorashooyinka dalka Masar.
Sidoo kale golaha ayaa hoos u dhigay da’da musharaxa iyadoo markii hore ay ahayd 30 jir balse laga dhigay xilligan 25jir, halka tirade kuraasta golaha shacabku ay ahaan doonto shan boqol iyo afar kursi.
Shaahiin ayaa ku nuuxnuuxsaday in aysan jiri doonin kormeerayaal caalami ah oo la socon doono doorashooyinka islamarkaana aan la ogolaan doonin adeegsiga xayeysiisyo Diini ah.
Garsoorka dalka Masar oo si guud ahaaneed u maamulayey doorashooyinkii golaha shacabka sanaddii 2005 xilligaas oo kooxda Ikhwaanul Muslimiin ay ka heshay shan kursi kuraasta golaha, waxayna noqotay awoodda siyaasadeed ee ugu weyn dalka masar.